‘Mootummaa waliin waggaa 24 keessatti marii 40 ol goonus haga yoonaa – Kichuu
HomeAfaan OromooRadio‘Mootummaa waliin waggaa 24 keessatti marii 40 ol goonus haga yoonaa
‘Mootummaa waliin waggaa 24 keessatti marii 40 ol goonus haga yoonaa walii galuu hin dandeenye’ Adda Bilisa Baasaa Ogaadeen
NAAYIROOBII — (voaafaanoromoo) — Mareen dhiyeenya Adda Bilisa Baasa Ogaadeeni fi Mootummaa Itiyoophiyaa waliin raawwatame walii galteerraa utuu hin gahin beellama birootiin xumurameera. Itti Gaafatamaan Dhimma Alaa Adda Bilisa Baasaa Ogaadeen, mareen gaggeeffame, wal dubbii itti aanuuf karaa banuuf ka ture akka ta’e VOA’f himaniiru.
Mareen kun akka haaraatti ka jalqabe bara 2012 yoo tahu, inni dhiyeenya ta’e kun isa 4ffaadha. Qaamolee lameen ka mariyachiisaa turan bulchaan kutaa Bulchiinsa Garriisaa, ka Keeniyaa, Abdii kooranee, ‘mareen torbee darbe gaggeeffame kun fooyya’aa akka ture’ himan.
Sanbata darbes dhalattoota Ogaadeen keeniyaa jiraatan waamee dhaabbatichi waa’ee marii Mootummaa Itiyoophiyaa faana gochaa jiru isaaniif himeera.
Mootummaan Itiyoophiyaa garuu dhimma kana irratti haga yoona ibsinni kenne hin jiru.
Galmoo Daawit gabaasa dabalataa qaba
Labsiin Yeroo Muddamaa Labsameyyuu Yaddoon Nageenyaa Hin Jiru, Jedhu Ministarri Dhimma-alaa Itiyoophiyaa
WAASHINGITAN, DIISII — Ministarri dhimma-alaa Itiyoophiyaa – torban dabre keessa, mootummaan isaanii labsii yeroo muddamaa labse iyyuu, yaaddoon nageenyaa biyyattii keessa akka hin jirre dubbatu.
Muddama siyaasaa biyyattii keessa qabbaneessuutti fuulefachuun – jechuudhaan, eega mootummaan hidhamtoota siyaasaa qeeqxota isaa ta’an bebbeekamoo fi hoogganoota dhaabota mormituu dabalatee – hidhamtoota hedduu hiikanii guyyoota lamaa booda, eega muummichi-ministaraa biyyattii, waltajjii siyaasaa bal’isuuf karoora paartiin isaanii qabateef gumaachuuf taayitaa gad-lakkisuuf eega xalayaa galfatanii guyyaa tokko booda, mootummaan immoo gaafa Guraandhala kudha ja’aa labsii yeroo muddamaa kana labse.
Ambaasaddaroota biyyoota alaaf har’a ibsa Finfinnee keessatti kennaniin kan kana dubbatan – ministarrri dhimma-alaa Itiyoophiyaa – Obbo Warqinee Gebeyyehu — “mootummaan labsii yeroo muddamaa kana labsuun isaa, tasgafbii-dhabinsa biyyattii keessa jiru, seera-eeginsa idileetiin to’achuu waan hin dandeenyeef” – jedhan.
Ambaasaddaroonni biyyoota alaa garuu, waa’ee labsii yeroo hatattamaa kana yaaddoo akka qaban ibsanii jiran.
Gabaasaa guutuu dhaggeffadhaa